Sida Loo Helo Habbo Credits Lacag La'aan | Madasha Mobile -ka
Ignacio Sala | 23/09/2021 18:00 | Ciyaaraha
Shaqada ugu weyn ee shabakadaha bulshadu na siiyaan waa in la abuuro bulshooyinka adeegsadayaasha leh dhadhan isku mid ah, wadaaga macluumaadka, wada sheekaysiga, ballaariya saaxibadeenna saaxiibbada ah ... Hase yeeshee, ma aha sida keliya ee looga qaybgeli karo bulshooyinka. Minecraft, Roblox, iyo Habbo waa tusaalooyin kale bulshooyinka aad la wadaagi karto dhadhan isku mid ah.
Maqaalkaan waxaan diirada ku saareynaa Habbo, oo ah bulsho dalwaddii internetka ah halkaas oo aan ku yeelan karno saaxiibo, sheekeysano oo aan ku raaxeysano ciyaaro badan. Si ka duwan Minecraft laakiin sida Roblox, Habbo waxay na siisaa tiro aad u badan oo wax-ku-iibsasho ah si aan u habaynno avatar-kayaga. Maqaalkan waxaan ku bari doonaa sida lacag looga sameeyo Habbo lacag la’aan, adigoon ku bixin hal euro, doolar, peso ...
1 Waa maxay Habbo
1.1 Waa lacag la'aan
1.2 Xakamaynta waalidka
2 Sida loo helo dhibco lacag la'aan ah Habbo
2.1 Ku rakibidda codsiyada iyo ciyaaraha iyo u adeegsiga waqti cayiman
2.2 Diiwaangelinta bogagga shabakadda
2.3 Samaynta sahanno
3 Maxaad u bixinaysaa dhibcaha bilaashka ah?
4 Ka digtoonow aaladaha aan rasmiga ahayn
Waa maxay Habbo
Xabbo waa a bulshada tooska ah ee internetka oo leh bilicsanaanta cayaaraha fiidiyowga laga soo bilaabo 80 -meeyadii halkaas oo aan ku abuuri karno avatar noo gaar ah iyo meesha aan ku yeelan karno saaxiibo, sheekeysi, ciyaar naqshadeyn, dhisno qolal ... Sida aan arki karno, hawlgalka aasaasiga ah ee Habbo wuxuu aad ugu eg yahay Roblox, halkaas oo aan sidoo kale ka abuuri karno ciyaaro, aan ku abuuri karno bulshooyin, la sheekayso dadka kale ...
Adeeggan, sababtoo ah uma tixgelin karno ciyaar ahaan, wuxuu noo oggolaanayaa inaan helno kooxo iyo goleyaal abuura agagaarka bulshooyinka leh dhadhan isku mid ah waa inaan door ka ciyaarnaa.
Mid ka mid ah hababka lacag -abuurka ee ay Habbo na siiso waa iyada oo loo marayo bilicsanaanta avatars -ka. Habbo waxay na siisaa a dhar aad u badan nooc kasta, dhammaan fasallada, waqtiyada oo dhan, dhadhanka oo dhan ...
Dhammaan dharka laga heli karo ciyaarta, waan awoodnaa oo keliya iyaga ku kasbadaan lacagaha dhexdooda, qadaadiic ah oo aan ku iibsan karno lacag dhab ah inkasta oo aan sidoo kale ku heli karno lacag la’aan annaga oo raacaya tillaabooyinka aan kugu tusnay maqaalkan.
Toddobaad kasta Habbo waxaan ka heli doonnaa tiro aad u badan tartamada ay ka qaybgeli karaan dhammaan ciyaartoydu, laga bilaabo tartamada qolka iyo sawirada, ilaa fiidyowyada, tartamada muuqaalka, farshaxanka pixel-ka… Lahaanshaha mala-awaalka iyo rabitaanka madadaalada waa lama huraan si aad ugu raaxaysato cinwaankan.
Waxa ugu fiican, cinwaankan gabi ahaanba waa bilaash dhammaan isticmaaleyaasha doonaya, sida Roblox, mana aha lagama maarmaan in lacag lagu maal geliyo illaa aan doonayno inaan u habaynno avatars -kayada iyada oo loo marayo xulashooyinka laga heli karo dukaanka.
Waa lacag la'aan
Waxyaabaha kale ee ay Habbo na tusayso Roblox waa in sidoo kale loo heli karo labada kombiyuutar iyada oo loo marayo daalacashada shabakadda (sidaa darteed waxay ku shaqaysaa ficil ahaan kombiyuutar kasta xitaa haddii ay duug tahay) iyo Aaladaha mobilada ee macruufka iyo Android iyada oo loo marayo codsiyadooda.
Developer: Shirkadda Sulake Oy
Habbo waxay siisaa dadka isticmaala diiwaangelinta laga bilaabo 14 illaa 1 sano helitaanka madal aan xad lahayn, iibsashada noo oggolaanaysa inaan ku iibsanno kaliya shilimaad iyo dheeman ciyaarta.
Sida ciyaar kasta oo kale oo u qalanta milixdeeda, Habbo waxay u diyaarisaa waalidiinta talooyin loogu talagalay carruurta inay si ammaan ah ugu ciyaaraan masraxa, jawi nabdoon, oo aan lahayn nooc kasta oo khatar ah. Tani waa mid kale oo ka mid ah astaamaha ay la wadaagto Roblox.
Dhinacan waa in la tixgeliyaa oo la fiiriyaa ka hor inta aan carruurteena loo oggolaan. Goobaha noocan ah Waxaa badanaa adeegsada pedrastas kuwaas oo iska dhiga inay carruur yihiin, marka waa inaan xadidnaa, intii suurtogal ah, isgaarsiinta saaxiibbada iskuulka, qaraabada ...
Xakamaynta waalidku aad bay u fududahay in la habeeyo, markaa waa inaad ku bixisaa kaliya 5 daqiiqo cu abuur ilmahaaga jawi ammaan ah ku raaxayso madalkan.
Sida loo helo dhibco lacag la'aan ah Habbo
Si ka duwan ciyaaraha kale sida Fortnite ama Roblox, Habbo waxay u oggolaaneysaa ciyaartoy lacag ku hel lacag la'aan iyada oo loo marayo degelkeeda. Waxa kaliya oo ay tahay inaan sameyno waa rakibidda codsiyada iyo / ama cayaaraha oo aan u adeegsanno waqti cayiman. Waxa kale oo uu nagu martiqaadayaa inaan booqano shabakadaha ama aan sahanno si aan lacag lacag-la’aan ah ugu helno ciyaarta.
Dhammaan hababka uu madalkani inoo diyaarinayo si aan u kasbanno dhibco lacag la'aan ah waxaan isticmaali karnaa hal mar oo kaliya. Ma heli doonno dhibco dheeraad ah haddii aan soo jeedinno isku mid ah ku celcelinno, sidaa darteed haddii ay maskaxdaada ku soo dhacday, waad iska illoobi kartaa.
Habbo waxay noo oggolaanaysaa inaan ku helno dhibco lacag la'aan ah 3 siyaabood oo suurtogal ah:
Ku rakibidda codsiyada iyo ciyaaraha iyo u adeegsiga waqti cayiman
Tirada dhibcaha aan heli karno markaan rakibno cayaaraha iyo / ama codsiyada aad buu uga sarreeyaa diiwaangelinta bogagga shabakadda ama samaynta sahanno. Ciyaarahan waxay nagu qasbayaan inaan gaarno heer gaar ah ama aan si joogto ah u ciyaarno ugu yaraan maalmo kahor intaan la helin dhibcaha bilaashka ah.
Xaaladda codsiyada, waxay nagu martiqaadayaan inaan samayno koonto oo aan si joogto ah u isticmaalno arjiga. Ma aha dhammaan codsiyada noo oggolaanaya inaan helno dhibco lacag la'aan ah kuwa aan garanayn, qaar ka mid ah codsiyadaas ayaa ah TikTok, Sawirada Amazon, Norton Secure VPN
Diiwaangelinta bogagga shabakadda
Diiwaangelinta bogagga shabakadda waa hab kale oo Habbo noo soo bandhigto hel dhibco lacag la'aan ah, inkasta oo tirada ay na siiso ay aad uga hooseyso waxa aan ka heli karno aaladdayada gacanta.
Doorashadan ayaa ah tan ugu yar ee lagu taliyo maaddaama ay nagu martiqaadayso inaan iska diiwaangelinno emayl halkaas oo aan ka helayno qaddar aad u tiro badan oo ah nooc kasta.
Boggagaan shabakadaha ayaa na siiya cinwaanada sida soo jeedinta sida ku guuleysiga PS5, MacBook, iPhone, Yves Saint Lauren ama badeecadaha kanaalka, kaararka hadiyadda ee McDonald oo gaaraya 100 euro, hel shaybaarro alaab oo bilaash ah ...
Si looga hortago adeegsadayaasha inay adeegsadaan xeelado ama habab noo oggolaanaya inaan helno dhibco annaga oo aan helin emayl sax ah, adigoo gujinaya xiriir kasta, waxay na tusi doonaan shuruudaha iyo tallaabooyinka ay tahay inaan raacno si aan u helno dhibco lacag la'aan ah.
Haddii aan dooneyno inaan ka faa'iideysanno ikhtiyaarkan, waxaan adeegsan karnaa emayl ku meel gaar ah ama noo samee iimayl si gaar ah loo abuuray si aad u hesho dhibcaha Habbo oo bilaash ah mar kasta oo aad ku darto habab cusub si aad uga hesho mareegahaaga.
Mid kale oo ka mid ah hababka rasmiga ah oo gebi ahaanba sharciga ah ee ay Habbo na siiso hel lacag lacag la'aan ah waa sahan. Tirada dhibcaha aan helno waxay la mid tahay inta aan helno annagoo iska diiwaangelinayna bogagga shabakadda.
Marka la samaynayo sahanka noocan ah, mar walba waa inaan gal emaylkeena, sidaa darteed aakhirka waxaan ku guuleysan doonnaa isla natiijada aan iska diiwaangelinno bogagga shabakadda: in emaylkayagu ka buuxo boosteejo qashin ah, taas oo ay ahaan lahayd wax aan suurtagal ahayn in la iska qoro.
Maxaad u bixinaysaa dhibcaha bilaashka ah?
Xogta isticmaalaha waxay aad ugu qiimo badan yihiin wakaaladaha suuq geynta. Xogtan, waxay ku fulin karaan ololeyaal kala qaybsan oo loogu talagalay hodanka qaarkood ee dadka ha ahaato da ', jinsi, goob, heer dhaqaale, dhadhan ...
Abaalmarinta noocan ah waxay u oggolaaneysaa shirkadaha inay kordhiyaan tirada soo dejinta arjiga si ay u kor u kaca qiimeynta Play Store iyo App Store iyada oo aan dukaammadii la arkin dhaqdhaqaaqyo yaab leh oo laga yaabo inay saamayn ku yeeshaan darajadooda.
Si ammaan ah ayaan u dhihi karnaa taas Habbo waxay iibisaa dhammaan xogta ay ka hesho dadka isticmaala, iyada oo loo marayo hababka 3 ee ay bixiso si aad u hesho dhibco lacag la'aan ah, shirkad ku jirta isla kooxdaas oo u heellan bixinta adeegga noocan ah.
Ma aha markii ugu horreysay, mana noqon doonto tii ugu dambaysay. Dhowr sano ka hor, waxaan ku aragnay antivirus -ka bilaashka ah ee Avast, ururiyey xaddi badan oo xogta isticmaalaha ah kaas oo markii dambe ka iibiyay wakaalad xayaysiis oo isku koox ganacsi ah.
Aan aragno markaan baranno waxa qofna wax ma bixiyo oo markay arrintu sidaas tahay, waa sababta oo ah annaga ayaa wax -soo -saarka ah, sida xaalka Habbo.
Ka digtoonow aaladaha aan rasmiga ahayn
Kuwo badan ayaa ah isticmaaleyaasha isku daya inay lacag ka helaan ciyaar lacag la’aan waxayna ku dambeeyaan inay ku dhacaan khiyaanooyinka bogagga shabakadda qaarkood, bogagga shabakadda ee sheegta inay u oggolaadaan inay helaan lacag lacag la’aan ah iyagoo aan waxba samayn. Sida oo kale suurtogal ma aha hel V-Bucks bilaash ah Fortnite, helitaanka lacag bilaash ah ciyaaraha kale sida Habbo waa wax aan macquul ahayn, ilaa aad ka baxdo kanaalada rasmiga ah.
Habbo waxay u oggolaanaysaa dadka isticmaala inay lacag ku helaan lacag la'aan, sharci ahaan iyo gebi ahaanba si ammaan ah iyada oo loo marayo mareegeheeda, sidaan ku sharxay qaybtii hore. Tani waa sida kaliya ee lacag lagu heli karo. Iska ilow barnaamijyada ama bogagga internetka ee kugu martiqaadaya inaad lacag ku hesho Habbo oo bilaash ah adigoon bixin wax beddel ah ama codsiyada kugu casuumay inaad soo dejiso codsiyada (adoo raacaya hab la mid ah Habbo) laakiin adigoon helin dheeftii ballanqaadka ahayd.
Ujeeddada keliya ee bogaggaan shabakaddu waa in la helo lambarada kaarka deynta, iyadoo marmarsiiyo keliya loo hubi inaan nahay da 'sharci. Wax si gaar ah u soo jiidanaya marka ay yihiin carruurta inta badan ciyaaraya cinwaankan, carruurta laga yaabo in lagu qasbo inay qaataan kaararka amaahda ee waalidkood si ay u helaan abaalmarino aysan waligood helin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Sida loo helo dhibcaha Habbo oo bilaash ah